LXQT: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19? | Avy amin'ny Linux
LXQT: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19?
LXQT hazavana hafainganam-pandeha hafa koa Tontolo iainana Desktop, rahalahin'i LXDE. Ary toa ity farany, mazàna dia tsy misy fampahalalana marobe momba izany ao amin'ny tranonkala raha oharina amin'ireo hafa malaza sy be mpampiasa. Ohatra, ny lahatsoratra farany mamaritra momba LXQT, 5 taona mahery lasa izay, ny kinova laharana 0.9.0.
Ary koa, toy ny amin'ny LXDE, mazàna dia vitsy Fizarana GNU / Linux anisan'izany ny toa azy Tontolo iainana Desktop misy anao. Noho izany, amin'ity boky ity dia hifantoka manokana amin'ny Inona izany? y Ahoana ny fametrahana anao?. Manasongadina, mazava ho azy, ny ankehitriny DEBIAN GNU / Linux-fizarana meta, ao anatin'ny vao haingana indrindra Malagasy Bible, la laharana 10, anarana kaody Buster. Izay koa no fototry ny Distro MX-Linux 19 (Duckling mahatsiravina).
Raha mitanisa fampahalalana ofisialy dia azo ambara izao manaraka izao:
"LXQt dia tontolon'ny birao Qt maivana. Tsy hanelingelina anao izany. Tsy hianjera na hampiadana ny rafitrao io. Izy io dia mifantoka amin'ny maha birao mahazatra misy endrika maoderina. Ny LXQt dia efa tafiditra ao amin'ny ankamaroan'ny fizarana Linux sy BSD, mba hahafahanao manandrana azy amin'ny rafitrao mahazatra na amin'ny VM. Ny fampahalalana bebe kokoa momba ny fametrahana dia hita ao amin'ny LXQt Wiki ao amin'ny GitHub. Ara-tantara, ny LXQt dia vokatry ny fampifangaroana teo anelanelan'ny LXDE-Qt, tsiro voalohany an'ny LXDE's Qt, sy Razor-Qt, tetikasa iray mikendry ny hampivelatra ny tontolon'ny Desktop miorina amin'ny Qt miaraka amina tanjona mitovy amin'ilay LXQt ankehitriny. Ny LXQt dia tokony ho lasa mpandimby ny LXDE indray andro, fa hatramin'ny 09/2016 dia hitohy hiara-hiaina ny tontolon'ny birao roa izao. " "Momba" ny fizarana ofisialin'ny LXDE
1 Ny momba an'i LXQT rehetra
1.3.4 Fihetsika fanampiny na mifameno
Ny momba an'i LXQT rehetra
LXDE Navoaka tamin'ny ampahany tamin'ny taona 2013 avy amin'ny mpahay siansa momba ny solosaina Taiwanese Hong Jen Yee Rehefa vita PCManFM-Qt, ny maodelin'ny birao voalohany QT. Rehefa mandeha ny fotoana, ny birao manontolo an'ny LXQT, miaraka amin'ny tanjona hananana a tontolo iainana Desktop vaovao sy maoderina ary maivana for fizarana angovo sy loharanon-karena ambany, tsy mahafoy tanteraka ny fampandrosoana ny LXDE.
LXQT atao indrindra ao QT5 ary singa hafa ao KDE Frameworks 5. Ary amin'izao dia mandeha izy io 0.14.1 version (stable). Ny dikan-teny voalohany sy feno dia 0.7.0, navoaka tamin'ny 7 Mey 2014, ho vokatra voalohany amin'ny fampitambarana ilay tetikasa Razor-Qt y LXDE.
LXQT misy amin'ny alàlan'ny tahiry ofisialy amin'ny maro GNU / Distros Linux, toy ny: DEBIAN, Ubuntu ary Fedora. Ary ny sasany mitondra izany amin'ny toerana misy anao rehefa mifantoka amin'ny ekipa fanjifana loharanon-karena ambany izy ireo.
El fampiharana ny tontolo iainana teratany LXQT Izy io dia misy programa maromaro, ity manaraka ity no marika famantarana na fanta-daza indrindra: PCManFM-Qt (Mpitantana rakitra), Leafpad-Qt (Tonian-dahatsoratra), LXImage-Qt (Image Viewer), ankoatry ny maro hafa.
Fanamarihana: LXQT is the Tontolo iainana Desktop ankehitriny tanterahin'i Hong Jen Yee sy ny vondrom-piarahamonin'ny Developers, saingy tsy nahafoy ny fampandrosoana ny LXDEsatria manandrana mitondra azy io izy ireo GTK + 3 ho an'ny mifanentana amin'ny ny Tontolo iainana Gnome3. Araka izany, ny fomba itondrany LXQT miaraka amin'ny QT5 sy KDE Frameworks 5 hahatratrarana ny Tontolo iainana Plasma KDE.
Manome tontolo iainana birao maivana sy maivana, ilaina amin'ny solosaina miaraka amin'ny loharanom-pahalalana CPU sy RAM voafetra na fampisehoana ambany. Ankoatr'izay dia mora ampiasaina amin'ny maro izy, misaotra a interface tsara manintona fa miaraka amin'ny fomban-drazana.
Izy io koa dia mitazona izany vondrom-piarahamonina mpamorona iraisam-pirenena, maro amin'izy ireo no miasa LXDE.
Ireo singa ao aminy dia mitazona ny filozofia modular an'ny fotony LXDE, izany hoe, afaka ampiasaina tsy miankina amin'ny azy izy ireo Tontolo iainana Desktop LXQT.
Tsy manana mpitantana varavarankely manokana izy io, saingy matetika ampiasaina amin'ny Openbox. Na dia ny fampidirana azy amin'ny XFWM y Muffin.
Manana a Mpampiasa mahazatra na eo aza ny mety ho vokariny Rindrambaiko QT5 sy KDE 5.
Mivoatra tanteraka izany ary tsy nahatratra ny anao kinova matotra voalohany (1.0) saingy tsy mitsaha-mitombo ny vondrom-piarahamoniny satria manana ny tanjony betsaka ny fotony.
Para hamantatra bebe kokoa afaka mitsidika azy ianao tranonkala ofisialy ary ny an'ny Distro mpamorona azy:
Tranonkala ofisialin'ny Tetikasa LXQT
Aiza no azonao idirana fizarana ofisialy azo ampiharina, toy ny a Blog, Wiki ary Forum, ankoatry ny maro hafa. Ireto rohy manaraka ireto dia misy ihany koa ho famenony ny vaovao LXDE:
Arch Wiki amin'ny MATE
Wikipedia wiki ao amin'ny LXDE
Safidio ny Tontolo iainana Desktop LXQT ary ny fitaovana hafa na ny fonosana fanampiny.
Fanamarihana: Azonao atao koa ny mametraka ny tontolon'ny Desktop miorina amin'ny LXQT mora kokoa amin'ny fanoloana ny fonosana lxqt ny lxqt-core.
Famerenana indray ary fidio amin'ny fisafidianana ny Tontolo iainana Desktop LXQT, raha toa ka manana mihoatra ny iray Tontolo iainana Desktop napetraka ary tsy nifidy ny Login Manager lxqt-session.
Ary tadidio fa ity no farany ary lahatsoratra fahenina amin'ny andiany iray momba Tontolo iainana Desktop GNU / Linux. Ireo teo aloha dia manodidina GNOME, KDE Plasma, XFCE, kanelina, VADIKO y LXDE. Betsaka ny hafa Tontolon'ny Desktop mihoatra ny mety hitrandrahana amin'ny lahatsoratra hafa amin'ny ho avy.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny «Entorno de Escritorio» fantatra amin'ny anarana hoe «LXQT», rahalahin'i «LXDE», fa miaraka amin'ny tsy fitovizany, voasoratra ao amin'ny Technology «QT», raha tokony ho «GTK+2», manana birao klasika misy endrika maoderina izy io ary tena tsy dia ampiasaina / fantatra ao anatin'ny tontolon'ny «Distribuciones GNU/Linux», dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » LXQT: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19?
Tsy Mifantoka dia hoy izy:
Ny fotoana farany nanandramako ny LXQt tao amin'ny Debian 10 dia nitondra rindranasa Xfce sy ilay mpamorona Xfwm ary mpitantana varavarankely. Toa tsy dia nampidirina tsara aho. Apper dia tsy nametraka ireo sary masina ary tsy hita ilay mpampita vaovao.
Etsy ankilany, ny distro mitovy amin'ny Plasma dia mandany mitovy na kely. Tsy nahatsiaro tena ny LXQt.
Valio ny Autopilot
Miarahaba anao, Autopilot. Hatramin'izao, niaraka tamin'ny LXQT nandritra ny 15 andro mahery aho, tsy mbola nahita olana na fihenam-bidy. Ary tena tsara sy miasa izy io. Andramo indray ny mahita ny hevitrao amin'izao fotoana izao.
argemiro dia hoy izy:
Inona ny kinova apetraka amin'ny debian?
0.14.1 na 0.12
Mamaly an'i argemiro
Mihobia! Argemiro. Mampiasà 0.14.1. Misaotra tamin'ny hevitrao.
Abd dia hoy izy:
Manaova Console na Terminal avy amin'ny tontolon'ny Desktop
Alefaso manaraka ny baiko baiko:
apt hametraka tasksel
apetraho ny adiresy lxqt-desktop –new-install
Tohizo hatramin'ny farany ao amin'ny Procedure Guided Tasksel (Task Selector).
Fampiasana ny baiko Tasksel amin'ny alàlan'ny Command Line Interface (CLI)
Manaova Console na Terminal amin'ny alàlan'ny bokotra Ctrl + F1 ary manomboha session root ho an'ny mpampiasa super.
Safidio ny tontolon'ny Desktop LXQT sy ny fitaovana hafa na ny fonosana fanampiny.
Tohizo hatramin'ny farany ny fomba fitarihan'ny Tasksel (Task Selector).
Mivadika mihodina ve?
Mamaly an'i abd
OpenWifi, tetikasa loharano misokatra hampiharana wifi mifototra amin'ny FPGA sy SDR
LXDE: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19?